Window 8 Mail app font error - MYSTERY ZILLION
Window 8 Mail app font error
December 2012 edited December 2012 in Help Desk
window 8 mail app မှာ မေးတွေကိုဇော်ဂျီနဲ့ဖတ်လို့ရအောင်ဘယ်လို ဆက်တင်ချိန်ရမလဲ ဆိုတာဖြေပေးကြပါ။
(ဇော်ဂျီ + ကီးဘုတ် သွင်းပြီး)။
ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ ယူနီကုတ်ဖောင့်နဲ့ပေါ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီတော့ ဘယ်လိုချိန်ရလဲ မသိဘူး
ဒီဆိုက် က ဇော်ဂျီ မချစ်သူတွေလဲ အောင့်ကာနမ်း ပြီးဖြေပေးကြပါအုန်း။
They said can't change Default font.
I don't have Windows 8 and still not test yet.
ကျေးဇူးပါ ကိုဆေတန် ။
You can change, but I won't tell you how.
အောင့်ကာနမ်း ပြီး -- use unicode
why abab WHY don't show u r genius or .....?????
အပြောင်းဘဲ သုံးကြည့် ရင် ဘာမှအငြင်ရဘဲနေမှာပေါ့။ )
ကျနော်တော့ အန်းဒရိုက်လို အော်ဖောက် တွေကို နာမည်ပြောင်း ဇော်ဂျီနဲ့ ရပလေ့ လိုက်ရင် ကောင်းမလားဘဲ။
အိုက်လိုလုပ်လို့ ရနိုင်မရနိုင်။ ရနိုင်ရင် ဘယ်လို အယ်ရာ တွေဖြစ်နိုင်သလဲ ဖြေပေးကြပါအုန်း။